Codsigan wuxuu u maleynayaa qoraalka kugu habboon sawirkaaga inuu adiga kugu habboon yahay. Wararka IPhone
Ku soo rarida sawirada shabakadaha bulshada waa wax maanta ugu caansan waqtiga Instagram ay umuuqato inaysan waligood lumin hamiga isticmaaleyaasha cusub (waxay gaareen ¡¡700 malaayiin! dhowr maalmood ka hor) iyo taas oo ah casriga ayaa sii kordhaya kaamirooyinka wanaagsan, kordhinta rabitaanka wadaagista natiijooyinka. Dhibaatada? Shabakadaha bulshada waxay dalbadaan hal-abuurnimo dhan walba, maahan oo keliya sawirka.
In ka badan hal mar ayaa nalaga tagi doonaa iyadoo laga fekerayo cinwaanka ku habboon sawirkeenna, midka muujiya wax isla markaana, isla markaa, si fiican ugu habboon qaabkeenna. In kasta oo cinwaan wanaagsan oo ku yaal Instagram, Twitter ama sawirka Facebook uusan noo xaqiijinayn inuu yeelan doono isdhexgal badan, marna xanuun ma leh in lagu daro taabasho dheeri ah oo hal-abuur ah sidoo kale waqtigii aan soo rarnay sawirkaas sida wanaagsan ee aan ku soo jirnay.
Daqiiqadahaas aan caqliga ku kala firidhnay, waxaa jira codsi dhowaan yimid App Store oo wax weyn ka tari doona in lagu daro cinwaanno hal abuur leh sawirradeena. Waxaa laga heli karaa magaca Rubric iyo waxa runtii ka dhigaya barnaamijkan gaarka ah waa inuu wax ka beddeli doono weedhaha la soo jeediyey iyo ishtags iyada oo ku saleysan waxa ka muuqda sawirka in aan xusho. Waqtigan xaadirka ah hawlgalku aad ayuu ugu xaddidan yahay Ingiriisiga (jumladaha qaarkood ayaa lagu kala bixi karaa Isbaanishka, markay ogaato maalinta usbuuca ee sawirka laga qaaday, tusaale ahaan, laakiin wax kale oo yar).
Si aad u isticmaalno, waa inaan kaliya ka doorannaa sawirka isla su'aasha ah isla barnaamijka, ka dib markaa shaashad leh saddex walxood oo hoose oo hoose ah ayaa la soo bandhigi doonaa si loo doorto ishtags la xidhiidha, xigasho, ama hees ay ku jirto eraygii aan dooranay, taas oo u muuqata casaan cas. Marka aan helno qoraalka aan jecel nahay, waxaan riixnaa batoonka 'Boosta' si aan ugu nuqulno sabuuradda oo aan ugu dhejinno shabakadda bulshada ee waajibaadka saaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Hal-abuur la’aan? Abkaani wuxuu ku darayaa weedh -waxbadan ama kayar-macnaha guud ee sawirradaada
Waa maxay AirDrop?